घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू इब्राहिमा कोनेट बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो लेख को पूरा कभरेज प्रदान गर्दछ इब्राहिमा कोनाटेको बाल्यकाल कहानी, जीवनी, पारिवारिक जीवन, अभिभावक, प्रारम्भिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन, प्रेमिका, जीवनशैली र अन्य उल्लेखनीय घटनाहरू जब उनी बच्चा थिए जबदेखि उहाँ लोकप्रिय हुनुभयो।
इब्राहिमा कोनाटेको प्रारम्भिक जीवन र महान उदय। क्रेडिट: AllFootballApp, EstRep रिपब्लिकन र आईजी।
हो, सबैलाई थाहा छ डिफेन्डर सजिलैसँग उसको अचम्मको साथ पहिचान गर्न सकिन्छ (Feet फिट र inches इन्च) उचाई। यति मात्र, कि उहाँ फेरि संसारमा सबैभन्दा underrated केन्द्र हो।
यद्यपि, केवल एक हातले फुटबल प्रेमीहरूले इब्राहिमा कोनाटेको जीवनी पढेका छन् जुन हामीले तयार गरेका छौं र धेरै चाखलाग्दो छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
इब्राहिमा कोनाटे बाल्यकाल कहानी:
इब्राहिमा कोनाटी फ्रान्सको पेरिस शहरमा मे १ 25 1999। को २th औं दिनमा जन्मेका थिए। Foot खुट्टा defend डिफेन्डर एक ठूलो परिवारमा जन्मेको थियो, यति नै, उहाँ आफ्ना बाबुआमामा जन्मेका कान्छो छोरामध्ये एक हुनुहुन्छ।
अन्तिम बच्चा नहुँदा पनि, सानो इब्राहिमाले आफ्नो प्यारो सानो भाइसँग नजिकको उत्तम संसारको आनन्द उठाए जुन मोरिबा कोनाटे नामबाट जान्छन्।
युवा इब्राहिमा कोनाटेको हुर्किए उसको बच्चा भाई मोरिबा जसलाई ऊ आफ्नो घनिष्ठ मित्र ठाने। I आईजी
इब्राहिमाका लागि सबैभन्दा ठूलो बाल्यकाल स्मृति उनको सानो भाई मोरिबासँगै बिताएको थियो। ती दुई भाइहरूले एक अर्काप्रति सानातिना प्यार विकास गरेका छन, एउटा यस्तो उपलब्धी जसले दुबैको मित्रतालाई आजको लागि अतुलनीय बनाएको छ।
इब्राहिमा कोनाटे परिवार उत्पत्ति:
उसको अन्धकार देखिन्छ, तपाईं सायद अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ कि डिफेन्डरका आमा बुबाको सम्भवतः अफ्रिकी वंश छ। ठीक छ, तपाईं सही हुनुहुन्छ। सत्य यो हो कि इब्राहिमा कोनाटेको परिवार मालीबाट आएको हो।
यदि तपाइँलाई थाँहा थिएन, माली एक ल्याण्डस्क्ल देश हो, पश्चिम अफ्रिकाको सब भन्दा ठूलो देश (आकार द्वारा)। पश्चिम अफ्रिकी देश टेक्सासको भन्दा लगभग दुई गुणा ठूलो छ, जुन दोस्रो ठूलो अमेरिकी राज्य हो।
के तपाईंलाई थाहा थियो?… इब्राहिमा कोनाटेसँग समान उल्लेखनीय फ्रान्सेली फुटबलरहरूको साथ समान मालियियन पारिवारिक उत्पत्ति छ। यी फुटबलरहरू मनपर्दो समावेश गर्दछ Moussa Sissoko, Moussa Dembele, एन'कोलो कन्टे र Djibril Sidibé.
हरेक बुवा र आमा आमा शान्त बच्चा हुर्काउन चाहन्छन र भाग्यवश, इब्राहिमा कोनातेका आमा बुबाले त्यो गुण छोरामा पाए। सत्य यो हो कि ′ ′ ″ ″ डिफेन्डर सधैं बचपनको दिनदेखि शान्त हुन्छ। एक सानो बालकको रूपमा, कोनाटेसँग उनले जीवनमा के चाहान्छन् भन्ने कुराको दर्शन पाएका थिए।
परिवारका सदस्यहरूको सहयोगमा उसले आफ्नो भविष्यको कल्पना गर्न सक्थ्यो। थप रूपमा, उसको कुरालाई एक चीजको सही दिशामा सेट गर्नुहोस्- एक फुटबलर। जब केहि बच्चाहरू अपराधमा बढेका थिए, कोनाटेले शान्तिमय र दूरदर्शी बाल्यकालको जीवन बिताए।
जवान केटाले आफ्नो बाल्यकालका दिनहरूमा धेरै फुटबल खेल्थ्यो। दैनिक फुटमा उसको फुटबल कौशल सुदृढ पार्नु कोनाटेको आफ्नै शिक्षाको तरीका थियो। होईन, फुटबल खेल्नु उसको बुबाआमाको स्वीकृति हो। अपराध र हिंसा र लागूपदार्थको प्रयोगसँग सम्बन्धित जोखिम कारकहरूलाई कम गर्न उसको आमा र बुबा दुवैले सामाजिक राम्रोको एक साधनको रूपमा देखेका थिए।
जीवितको लागि फुटबल खेल्ने तिनीहरूको केटाको चाहनालाई बुझ्दै कोनाटेका अभिभावकहरूले उनको आकांक्षालाई समर्थन गर्न यथासक्दो गरे। १० बर्षको उमेरमा, जवान केटा सफल परीक्षण पछि पेरिस एफसीको एकेडेमी रोस्टरमा भर्ना भए। पेरिस एफसी पेरिस मा आधारित एक फ्रान्सेली पेशेवर फुटबल क्लब हो। यो कोनेटेको परिवारको घरको निकटताका कारण सबैभन्दा रुचाइएको एकेडेमी थियो।
पेरिस एफसीमा कोनाटेले बाल्यकालको फुटबलको आनन्द उठाए किनकि उनले आफ्नो प्रतिभा धेरै छिटो बढेको देखेका थिए। सफल प्रगति गरिरहेको उनले पेरिस एकेडेमीमा छिटो बढेको देखे।
१ 14 वर्षको उमेरमा, इब्राहिमा कोनाटेका आमा बुबाआमाले आफ्नो छोरालाई उनको ठाउँमा अन्य ठाउँमा फुटबल खेल्ने आवश्यकता महसुस गरे। उसका गुणहरूका लागि धन्यवाद, ती जवानले आफूलाई धेरै प्रतिष्ठानहरूले ठूलो हस्ताक्षर गरे जसले आफ्नो हस्ताक्षरको लागि माग गरे।
रेन्नाइस र क्यानसँग अलि हिचकिचाई रहँदा, युवा इब्राहिमले सोचाक्सको लागि हस्ताक्षर गर्ने निर्णय गरे किनभने तिनीहरू अघि आउने पहिलो व्यक्ति थिए। अधिक, क्लब, अरूले जस्तो नभई, उसलाई भर्ती गर्ने सबैभन्दा इच्छा देखायो।
सम्झौताको बावजुद कोनाटेका आमा बुबा (विशेष गरी उनको आमा) अझै हिचकिचाए। उनी आफैंले सुविधा पुर्‍याउन क्लब भ्रमण गर्ने निर्णय गरे। अनुभवको बारेमा कुरा गर्दै, कोनेटले एक पटक भने।
“म मेरी आमासँगै एकेडेमीका सुविधाहरू हेर्न गएँ। उनले स्कूल तहमा देखी, उनीहरू गम्भीर थिए। त्यसैले म तिनीहरूसँगै सामेल भएँ। ”
रोड फेम जीवनी कथा:
पहिलो पटक आमाबुवा र परिवारका सदस्यहरूबाट टाढा सर्दै सामना गर्नु कुनै पनि युवा फुटबलरको जीवनमा सबैभन्दा कठिन चीजहरू मध्ये एक हो।
सोचाक्समा, इब्राहिमालाई यो बनाउनको लागि थाहा थियो, उसले आफ्नो नयाँ ठाउँलाई घर जस्तो महसुस गराउनु पर्‍यो। केहि समय पछि, उसले आफ्नो टीम साथीहरू - विशेष गरी राम्रो साथी, संग एकीकृत गर्न शुरू गर्यो। ब्रायन लस्मे (साथी फ्रान्सेली फुटबलर)।
कोनाटेको फुटबलि mat परिपक्वता Sochaux मा एक रोमाञ्चक थियो। प्रत्येक वर्ष, उनले लगनशीलताका साथ आफ्नो फुटबलको जिम्मेवारी लिदै प्रगति गरे। यद्यपि, सबै थोकमा सेवा गरिएको थिएन। अब तपाइँलाई कोनेटको जीवनी को एक टुक्रा ल्याउन को लागी तपाइँ सायद कहिल्यै थाहा थिएन।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… खराब स्वास्थ्य एक मात्र चीज थियो जसले एकेडेमी स्तरमा उसको प्रगति सीमित गर्‍यो। सत्य कुरा के हो भने, उहाँको स्वास्थ्यले उहाँलाई असफल तुल्यायो एकेडेमी स्नातक को माध्यम बाट स्केल गर्न को लागी आवश्यक थियो।
धन्यबाद, इब्राहिमा कोनातेका अभिभावक र क्लबले हस्तक्षेप गरे, उनलाई सान्त्वना दिए जब उनी केही समयमै निको भएनन्। अनुभवको बारेमा कुरा गर्दै, डिफेन्डरले एक पटक भने।
मेरो एउटा अपरेशन थियो जसले मलाई थोरै सुस्त बनायो, तर यसले मलाई अझ बलियो बनाउन अनुमति दियो।
स्पष्टसँग भन्नुपर्दा, मलाई कुनै पछुतो छैन किनकि म सफलतापूर्वक एकेडेमीबाट स्नातक भएँ।
फ्रान्सेली फुटबल बतायो फ्रान्सब्ल्यू एक साक्षात्कारमा।
क्यारियर टर्निंग पोइन्ट:
एकेडेमी स्नातक पछि, युवा इब्राहिमा क्लबको रिजर्भ टोली बी (Sochaux B) लाई पठाइयो। यद्यपि फेरी, जब उनले आफ्नो क्लबलाई संघर्ष गरिरहेका देखे र उनले उनलाई आफ्नो वरिष्ठ टोलीमा समाहित गर्न गाह्रो भएको देखे पछि चीजहरूले दुःखको कुरा नोट गरे।
धेरै निराश युवा फुटबलरहरू जस्तै, कोनाटेले मामिलाहरू आफ्नै हातमा लिए। नतिजाको प्रभाव हालको उसकी जीवनीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंश हुन, एक उसले हतारमा बिर्सनेछैन।
युवाले सोचाक्समा निराश महसुस गरे, एउटा विकास जसले क्लबबाट बाहिर निस्के। क्रेडिट: फॉर्च्यूनबेट्न्ग
“मैले यो छोडेर जाने निर्णय गरें किनकि मालिक लगभग कहिँ पनि थिएन र म कुहिरोमा थिएँ। कुरालाई नराम्रो बनाउनको लागि, मेरो ट्रेनर अल्बर्ट कार्टियर गयो।
यस अनिश्चितताको समयमा, मलाई भर्ती गर्न खोज्ने क्लबहरू झट्टै आक्रोशित भए। ती मध्ये एक आरबी लाइपजिग थियो।
ख्याति कथा जीवनी कहानी उठ्नुहोस्:
आफ्नो जीवनमा पहिलो पटक, इब्राहिमा कोनातेले हरियो घाँसहरुका लागि विदेशमा (ठीक जर्मनीमा) आफ्नो परिवार र देश छोड्नुपरेको थियो।
RB Leipzig मा, उहाँ एक डिफेंडरको जनावर बन्नुभयो। सत्य यो हो कि उसको विशाल feet फिट inches इन्च उचाईले सबै प्रतिद्वन्द्वीलाई उसको दयामा काम्ने बनायो।
इब्राहिमा कोनाटेको महान उदय। क्रेडिट: the4thofficial र मीडियारेफरी
यहाँ कोनेटको उदयका लागि दुई ठूला रहस्यहरू छन्। पहिलो हो जुलियन नागल्समन, युवा आरबी लाइपजिग प्रबन्धक जसले भर्ती गरे र उहाँमा धेरै विश्वास देखाए। जस्तै इथन एम्पपadu, Nagelsmann इब्राहिमा प्रयोग र कहिल्यै आफ्नो उमेर मा हेरेनन्।
दोस्रो, फ्रान्सेली डिफेन्डर साथी टिम साथीबाट प्रेरित भयो डेट अपमाकोानो जसलाई ऊ ठूलो दाजु ठान्छ। दुबै डिफेन्डर्स (केवल 40० को संयुक्त आयु मा) एक मजबूत रक्षात्मक साझेदारी, एक उपलब्धि जो कोच र प्रशंसक दुबै को गठन।
उनीहरूको बलियो बचाव साझेदारी जूलियन नेगल्सम्यानले सम्भव बनाएको हो। Und बुन्डेस्लिगा
फ्रान्समा लगभग अज्ञात, इब्राहिम कोनाटे, आफ्नो प्रारम्भिक उमेरको बावजुद, उनी भविष्यको हुने सम्भावना देखाउँदै “विश्वको सर्वश्रेष्ठ रक्षक ".
जस्तै अन्य उज्ज्वल सम्भाव्यताले मनपराउनेहरूको बारेमा कुरा गर्यो मेसन होलगेट र Matthijs de Ligt, इब्राहिमाले यो पनि प्रमाणित गर्‍यो कि उमेर केवल संख्या हो। बाँकी, हामी भन्छौं, उहाँको अब ईतिहास।
फुटबल फ्यानहरूले सोधेका छन्- इब्राहिमा कोनाटेको प्रेमिका को हो? क्रेडिट: ओन्जेमोन्डियल
प्रेम जीवन- एकल, विवाहित, प्रेमिका वा पत्नी ?:
चट्टानी डिफेंडर केवल आफ्नो6फिट4को लागी समाचार बनाउँदैन उचाई र प्रभावशाली फुटबल प्रदर्शन। भर्खरै, दुवै प्रशंसकहरू र प्रेसहरूद्वारा इब्राहिमा कोनेटको प्रेमिका छ कि छैन भनेर जान्न उत्सुक भए। अधिक, चाहे उहाँ अविवाहित हुनुहुन्छ, वा यदि उहाँ विवाहित हुनुहुन्छ (गोप्य पत्नीको साथ) र बच्चा (हरू) छन्।
घण्टाको गहन अनुसन्धान पछि, हामी यो महसुस गर्यौं कि कोनाटे (लेख्ने समयमा) उनको सम्बन्धलाई आधिकारिक बनाएनन्। वर्तमानमा, उसको सोशल मिडिया खाताले कुनै प्रेमिका, श्रीमती वा वागको सम्बन्ध वा संकेत झल्काउँदैन।
सहयोगीहरूले उनलाई पिचमा हेरे, र उहाँलाई अझ बढी जान्नको लागि, फ्यानहरूले प्रायः सोधेका छन्- इब्राहिमा कोनाटे को हो? अब उसको पिचको अफ-द पिचको जीवनको बारेमा जान्नु तपाईंलाई उसको अझ राम्ररी बुझ्न मद्दत गर्दछ।
सुरूवात गर्दा, यो सामान्य छ कि हाम्रा मनपर्ने फुटबलरहरू उनीहरूको प्रेमिका वा WAG को साथ शहर वरिपरि हिंडिरहेका छन्। कोनेट, तथापि, संग हिंड्न रुचाउँछन् Dagouss उसको बहुमूल्य खरायो। सत्य यो हो किfफुट defend डिफेन्डर एक लामो समय खरगोश अधिवक्ता हो।
इब्राहिमा कोनाटे व्यक्तिगत जीवन- उहाँ एक साँचो खरगोश अधिवक्ता हुनुहुन्छ - स्रोत: आईजी
उसको सफलताको कहानी यस्तै स्वादिष्ट हुने थिएन किनकि यो परिवारका सदस्यहरूविना बनेको छ। यस खण्डमा, हामी तपाईंलाई इब्राहिमा कोनाटेको परिवारका सदस्यहरूको बारेमा आफ्ना आमा-बुबाबाट शुरू गर्ने तथ्यहरू प्रदान गर्नेछौं।
इब्राहिमा कोनाटेको बुबाको बारेमा:
सबैभन्दा पहिला, उहाँ आफ्नो जन्मको आधारमा मालीयन मूलका हुनुहुन्छ। तपाईं, उनको बारे मा जानकारी कम दस्तावेज छ। जे होस्, हामी पक्का जान्दछौं कि कोनाटेका बुवा फ्रान्समा आरामदायी जीवन बिताउँदछन् जहाँ उनले आफ्नो छोराको प्रगतिलाई निगरानी गर्छन्।
इब्राहिमा कोनाटेको आमाको बारेमा:
हामी उनलाई सुरक्षात्मक आमा भन्छौं। कोनाटेको आमा एक हो जसले आफ्ना बच्चाहरूको सुरक्षा, पालनपोषण र हुर्कनको लागि असाधारण कदमहरू चाल्दछन्। उनी आफ्नो जवानीको क्यारियरको समयमा सबै समय उनलाई चिपकाइन्थ्यो। यो नबिर्सनुहोस् कि यो कोनाटेको आमा हो जसले उसलाई सोचाक्स एकेडेमीमा जानको लागि अन्तिम पटक दिए।
इब्राहिमा कोनाटेको भाइको बारेमा:
मोरिबा कोनाटे, इब्राहिमा कोनाटेको प्यारो सानो भाई सबै बढी छ। तल चित्रित, दुबै भाइहरू धेरै धेरै एक जस्तै देखिन्छन्। यदि सक्नुहुन्छ भने दुबै भाईहरुलाई छुट्याउन कोशिस गर्नुहोस्!.
इब्राहिमा कोनाटेको भाईलाई भेट्नुहोस् जो सबै वयस्क जस्तो देखिन्छ। - इन्स्टाग्राम
Worth मिलियन युरोको कुल मूल्य र market5मिलियन युरोको बजार मूल्य भएको निश्चित रूपमा कोनेटलाई करोडपति फुटबलर बनाउँदछ। यद्यपि यो ग्लैमरस जीवनशैलीमा परिर्वतन हुँदैन। किन?… यसको कारण यो छ कि इब्राहिमा कोनातेले आफ्नो कडा कमाएको ज्याला महँगो कार, हवेली, प्रेमिका, बज, इत्यादि प्रदर्शन गर्न प्रयोग गर्न मन पराउँदैनन्।
यसको सट्टा, फ्रान्सेली फुटबलर दुबई मरुभूमिमा छुट्टी यात्रा मा आफ्नो पैसा प्रयोग गर्दछ। कहिलेकाँही, उहाँ आफ्नो शक्ति पुन: स्थापनाको नाममा सबै चीजबाट टाढा समय बिताउन रुचाउनुहुन्छ।
कोनाटे दुबई मरुभूमिलाई मन पराउँछन्, जहाँ उसले आफ्नो बिदा बिताउँछ। I आईजी
यदि यो मरुभूमि यात्रा लिइरहेको छैन भने, कोनेट भन्दा लोकप्रिय समुद्री किनार गन्तव्यहरूमा गुणस्तर समय खर्च गर्न रोज्नेछ। सत्य हो, रक्षकले आफ्नो समुद्र र मरुभूमि जीवनको सुखलाई ग्रहण गर्दैन।
फुटबलरले समुद्री किनारमा गुणस्तरीय समय बिताउन मन पराउँदछ - स्रोत: Picuki
बाल्यकाल कहानी र जीवनी तथ्या wound्कको चोट तपाईलाई केही अनकही तथ्यहरू प्रकट नगरी पूर्ण हुन सक्छ। यस सेक्सनमा, हामी तपाईंलाई केही वास्तविक ज्ञान प्रदान गर्नेछौं जुन तपाईंलाई डिफेन्डरको बारेमा कहिले थाहा थिएन।
तथ्य # १: उसको तलब भंग गर्दै:
RB Leipzig मा उनको हस्तान्तरण पछि, जुलियन नागल्समन कोनाटेले एउटा सम्झौता गरे, एक जनाले उनलाई प्रति वर्ष १ लाख युरो (1०,००० पाउन्ड) तलब कमाइरहेको देखे। संख्यामा उसको तलब क्रunch्क गर्दै, हामीसँग निम्न छ।
टेन्चर / AMOUNT
युरो मा उनको कमाई
पाउन्ड मा उनको आय
डलर मा उनको कमाई
के उसले प्रति वर्ष कमाउँछ: € 1,000,000 £ 874,807 $ 1,092,295
के उसले प्रति महिना कमाउँछ: € 83,333 £ 72,900 $ 91,025
उसले प्रति हप्ता के कमाउँछ: € 19,380 £ 16,953 $ 21,169
उसले प्रति दिन के कमाउँछ: € 2,769 £ 2,422 $ 3,024
उसले प्रति घण्टा के कमाउँछ: € 115 £ 101 $ 126
उसले प्रति मिनेट के कमाउँछ: € 1.9 £ 1.7 $ 2.1
के उसले प्रति सेकेन्ड कमाउँछ: € 0.03 £ 0.02 $ 0.03
यो के हो IBRAHIMA KONATE कमाई गरिएको छ किनकि तपाईं यो पृष्ठ हेर्न शुरू गर्नुभयो।
यदि तपाइँ माथि के देख्नुहुन्छ पढ्छ (०), यसको मतलव तपाई एएमपी पृष्ठ हेर्दै हुनुहुन्छ. हाम्रो गैर AMP पृष्ठ सेकेन्डमा उसको तलब वृद्धि देखाउँदछ।
तपाईंलाई थाँहा थियो?… जर्मनी मा औसत मानिस जो वरिपरि कमाउँछ € 3,770 कम्तिमा एक महिना काम गर्नु आवश्यक पर्दछ 1.8 वर्ष कमाउन € 83,333। यो माथिल्लो तलब संरचना मा एक महिना को आधार मा इब्राहिमा Konate को ज्याला छ।
तथ्य # २: फिफा रेटिंग:
इब्राहिमा कोनाटेको फिफा सम्भावित
यो टुक्रा राख्ने समयमा फ्रान्सेली २० वर्षको मात्र छ। अझै, उसको समग्र रेटिंग reads reads पढ्दछ। अब, यसले तपाईलाई के भन्छ?…। हाम्रो लागि हामी विश्वास गर्छौं कि कोनेटको ठूलो सम्भावना छ, जुन उसले उनलाई एउटा मध्ये स्थानान्तरण गरेको देख्न सक्छ विश्व फुटबल मा सब भन्दा ठूलो क्लब। अधिक, सम्भावितहरू बीचमा लेबल गरिएको "विश्वका महान डिफेन्डरहरू"।
तथ्य # 3: इस्लामिक धर्ममा समर्पण:
उनको बलियो धार्मिक विश्वासको चिह्नको रूपमा, इब्राहिमा इस्लामका सबै नियमहरूको पालना गर्दछन् आफ्ना माता-पितालाई धन्यबाद दिन्छन् जसले उनलाई उनीहरूको इस्लामिक पारिवारिक संस्कृतिको पालना गराए।
इब्राहिमा कोनाटे इस्माईलिक धर्मलाई कसरी समर्पित छन् भन्ने प्रमाण। स्रोत- इन्स्टाग्राम
तथ्य # 4: उपनाम:
तपाइँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ कि यो "इब्राह" हो, तथापि, यो होईन। इब्राहिमा कोनाटेको उपनाम वास्तवमा "Ibu"। यो नाम ड्रेसि room रूममा हुँदा टीमका साथीहरूले उनलाई दिएका थिए। कहिलेकाँही, तिनीहरू पनि उहाँलाई कल "इबुप्रोफेन"।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो असंख्य मध्ये एक पढ्न को लागी धन्यवाद बचपनका कथाहरू प्लस अनर्थ जीवनी तथ्यहरू। LifeBogger मा, हामी शुद्धता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्दछौं। यदि तपाइँले केहि राम्रो देख्नुहुन्न भने, कृपया हामीलाई द्रुत रूपमा तपाइँका टिप्पणीहरू राखेर साझेदारी गर्नुहोस्।